China Cryogenic ụdị elu oru oma akwa ọcha nitrogen ikuku nkewa osisi mmiri mmiri na oxygen generator na-emepụta na suppliers | Ma ọ bụ
Cryogenic ụdị elu oru oma elu-adị ọcha nitrogen ikuku nkewa osisi mmiri mmiri na oxygen generator
Mwepu nkewa nke ikuku na-ezo aka na akụrụngwa nke na-enweta oxygen, nitrogen na argon site na ikuku mmiri na obere okpomọkụ site na iche nke ebe ọ bụla na-esi mmiri.
1.Simple echichi na mmezi ekele modular imewe na-ewu ụlọ.
2.Filly akpaghị aka usoro maka mfe na a pụrụ ịdabere na ọrụ.
3.Enwere ikike nke ulo oru ikuku di elu.
4.Ejiri nkwado nke ngwaahịa na mmiri mmiri ka echekwa ya maka ojiji n'oge arụmọrụ ọ bụla.
5.Odighi ike oriri.
Oge dị mkpirikpi.
Oxygen, nitrogen, argon na ndị ọzọ na-adịghị ahụkebe gas emepụta site ikuku nkewa unit na-ọtụtụ-eji ígwè, chemical
ụlọ ọrụ, refinery, iko, roba, electronic, ahụike, nri, ọla, ike ọgbọ na ndị ọzọ ọrụ.
O2 mmepụta 350m3 / h ± 5%
O2 ịdị ọcha ≥99.6% O2
O2 mgbali ~ 0.034MPa (G)
N2 mmepụta 800m3 / h ± 5%
N2 ịdị ọcha ≤10ppmO2
N2 mgbali ~ 0.012 MPa (G)
Ọnọdụ mmepụta ngwaahịa (na 0 ℃, 101.325Kpa)
Malite nrụgide 0.65MPa (G)
Na-aga n'ihu ọrụ oge n'etiti abụọ defrosting ugboro 12months
Oge mmalite ~ 24 Awa
Specific ike oriri ~ 0.64kWh / mO2 (abụghị inc. O2 Compressor)
Raw ikuku na-abịa site n'ikuku, na-aga site na ikuku nyo maka mwepụ nke ájá na ọzọ n'ibu urughuru na-abatakwa na-abụghị lub ikuku Compressor na-abịakọrọ site abụọ ogbo Compressor ka ihe ruru. 0.65MPa (g) .Ọ na-aga site na ngwa nju oyi wee banye ngwongwo na-eme ka ọ dị mma ruo 5 ~ 10 ℃. Mgbe ahụ, ọ na-aga ịgbanwee-ihe nhichapụ MS maka mwepụ nke mmiri, CO2, carbon hydrogen. Purifier mejupụtara abụọ molekul sieve jupụtara arịa. A na-eji otu mgbe anther na-agbanwe site na nitrogen n'efu site na igbe oyi na site na kpo oku kpo oku.
Mgbe ọcha, obere akụkụ ya na-eji dị ka agba gas maka tobaim expander, ndị ọzọ abatakwa oyi igbe ka mma site reflux (ọcha oxygen, ọcha nitrogen na n'efu nitrogen) na isi okpomọkụ Exchanger. Akụkụ nke ikuku amịpụtara site n'etiti akụkụ nke onye na-agbanwe ọkụ na-ekpo ọkụ ma na-aga ịgbasa tobaim maka imepụta oyi. Imirikiti ikuku gbasaa na-agafe subcooler nke ikuku oxygen si na kọlụm dị elu mee ka ọ gaa na kọlụm dị elu. Obere akụkụ ya na-agafe site na iji tufuo ọkpọkọ nitrogen ozugbo ma na-eme ka ọ dị ọkụ iji pụọ na igbe oyi. Akụkụ ọzọ nke ikuku na-aga n'ihu na-eme ka ọ dị jụụ na nso ikuku mmiri na-anwa ịdọrọ kọlụm dị ala.
Na ikuku kọlụm dị ala, ikuku na-ekewapụ na mmiri dị ka mmiri nitrogen na ikuku mmiri. Akụkụ nke mmiri nitrogen s nke esere na elu nke kọlụm dị ala. A na-ebute ikuku mmiri mgbe subcooled na throttled gaa n'etiti akụkụ nke kọlụm dị elu dị ka reflux.
A na-ewepụta oxygen oxygen site na akụkụ dị ala nke kọlụm dị elu ma na-emegharịghachi site na ikuku subcooler gbasaa, isi mgbanwe okpomọkụ. Mgbe ahụ, a napụtara ya na kọlụm. A na-ewepụta ihe mkpofu nitrogen site na akụkụ nke elu nke kọlụm dị elu ma na-eme ka ọ dị ọhụrụ na subcooler na onye na-agbanwe ọkụ na-ekpo ọkụ iji pụọ na kọlụm. A na-eji akụkụ ya dị ka gas dịghachi ọhụrụ maka MS purifier. A na-ewepụta nitrogen dị ọcha site na elu nke kọlụm dị elu ma na-emegharị na ikuku mmiri, mmiri mmiri nitrogen subcooler na onye na-agbanwe ọkụ na-ekpo ọkụ ka a ga-ewepụta ya na kọlụm.
Oxygen nke distillation kọlụm na abịakọrọ ahịa.
Mwube Na-aga n'ihu
Nke gara aga: Cryogenic oxygen osisi na-eri mmiri oxygen osisi
Osote: Cryogenic type mini scale ikuku nkewa osisi ulo oru oxygen generator nitrogen generator argon generator
Akwa arụmọrụ Oxygen Generator
Nnukwu Nitrogen Generator
Uru nke ngwaahịa 1. Nbudata ntinye na nhazi site na nhazi na ihe eji eme ihe. 2.Filly akpaghị aka usoro maka mfe na a pụrụ ịdabere na ọrụ. 3.Enwere ikike nke ulo oru ikuku di elu. 4.Ejiri nkwado nke ngwaahịa na mmiri mmiri ka echekwa ya maka ojiji n'oge arụmọrụ ọ bụla. 5.Low ike co ...